ကွာ သုံး ကွာ၊ ချာ သုံး ချာ၊ ပါ သုံး ပါ ဆို တဲ့ ဗဟု သုတ ရစရာ အကြောင်း လေးပါ…. – Zartiman
အောက်ပါ အကြောင်းအရာ စာစုသည် ဘုရားဟောဒေသနာ မဟုတ်သည့်အတွက် အချို့သူတွေအတွက် မှန်ချင်မှန်မယ်၊ အချို့သူတွေအ တွက် မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည်၊ဆေးမှင်ရည် စုပ်ထိုး၊ ကျောင်းထိုင်ပင့် ၊မြတ်သံဃာ၊ စာချုပ်ရန် ခက်သည့် အမျိုး။” ဆိုတဲ့ ရှေးပညာရှိများဆိုမိန့်စကားရှိပါတယ်။အရွယ်ရောက် လာကြသူ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတိုင်း (အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးကလွဲ ရင်)အိမ်ထောင်ပြုကြ မှာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ အခါမှာ လည်း မိဘပေးစားလို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ ကိုယ်အချင်းချင်း မေတ္တာမျှကြလို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိ ပါတယ်။ဘယ်လိုပုံစံ မျိုးဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုပြု အထူးဆင်ခြင်သင့်၊ ရှောင်ရှားသင့်သည့် “ကွာသုံးကွာ၊ ချာသုံးချာ၊ ပါသုံးပါ” ကိုတော့ အထူးရှောင်ရှားကြပါလို့ ရှေးပညာရှိများက သတိပေးပြောဆိုဆုံးမခဲ့ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေမှု တွေဖြစ်မှာ ဆိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ပါ။
ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါမှာ “ကွာသုံးကွာ၊ ချာသုံးချာ၊ ပါသုံးပါ”ကို သတိထားလိုက်နာကြဖို့လိုပါတယ်။
၃။ စိတ်နေသဘောထားတို့ ကွာခြားခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ လူမျိုးကွာခြားခြင်း ဆိုတာ လူမျိုးခြား ကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်မိတဲ့ မိန်းကလေး၊ယောက်ျားလေးတွေဟာ ကိုယ့်မွေးဖွား လာ မယ့်ရင်သွေးငယ်လေးတွေက လူမျိုးခြား စိတ်ပေါက်သွားရင် ကိုယ့်လူမျိုးတဖြေးဖြေးတုံးပြီး ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်လို့ပါ။
၂။ အယူ ဘာသာကွာခြားသူကို အိမ်ထောင်
ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်မိတဲ့ သူများဟာ ကိုယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် က အခြားဘာသာ ဖြစ်နေရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေ မှုတွေ အနည်းနဲ့အများဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကိုယ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဒါန သီလ ဘာဝနာတရားများကို ကျင့်ကြံနေတဲ့ သမ္မာဒဋ္ဌိ အယူမှန်နေသူ ဖြစ်လင့်ကစား ထိုကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ခြင်းရှင်ပြု ရဟန်ခံခြင်းစတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ် အလုပ်တို့ကိုလုပ်ပေမယ့် လို့ ကိုယ့် အိမ်ထောင်ဖက်က အယူဘာသာမတူညီသောကြောင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်က နေ့ထူးနေ့မြတ်၊ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့တို့မှာ ဘုရားသွားကျောင်းတတ် ကုသိုလ်ရေစက်တွေ လုပ်ခြင်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က ဘာသာခြားဖြစ်နေသည့်အတွက် လိုလားနှစ်သက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင်ရေရှည်မှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ကိုယ်ဟာဘာသာရေး နဲ့ပတ်သက်လို့ အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ စိတ်သဘောထား ကွာခြားသူဆိုတာ –
ကိုယ်က လှူချင် တန်းချင်၊ သီလစောင့်ချင်၊ဘာဝနာ တရားပွားများအားထုတ်ချင်သော်လည်း ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က ကိုယ့်လိုစိတ်ထား မျိုးမရှိဘူးဆိုရင် ထိုကုသိုလ်အလုပ်များကို ကိုယ့်အနေနဲ့ ပြုလုပ်ဖို့ မလွယ်ကူနိုင်တော့ပါဘူး။ ထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခွင့်မရလျှင် ကိုယ်ရဲ့ဘဝသံသရာအတွက်ဘာမှ အားကိုးစရာရှိတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
လက်ရှိဘဝ မှာလည်း စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ ပျောက်ဆုံးသွား နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖော်ပြပါ “ကွာသုံးကွာ”ကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် အရွေး ချယ်ကြဖို့ ရှေးပညာရှိများဆုံးမထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အသိဉာဏ် ဗဟုသုတ အတွေးအခေါ် နုံချာနေသူကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်မိပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဘာသာရေး၊မိသားစုအရေး စတဲ့အရေးတွေမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် တိုးတတ် ကြီးပွားအောင် မကြံစည်နိုင်၊ မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ပါဘူး၊အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်းစဉ်စားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲ။
သူများပြောတာအဟုတ်ထင်ပြီး လုပ်မိ လုပ်ရာ အကျိုးမဲ့စေမယ့် အလုပ်တွေကိုသာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွတ်တတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရေး မိသားစုအရေး စတာတွေကို နိမ့်ကျသထက် နိမ့်ကျအောင် လုပ်နေတတ်ပါတယ်။
၂။ စာရိတ္တနုံချာသူ ဆိုတာ-
အကျင့်စာရိတ္တမရှိတဲ့ သူမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်မိရင်လည်း အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ၊ မိသားစု အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အထင် မြင်သေးမှု၊ သံသယမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ခံရမှု၊ ရွံရှာမုန်းတီးမှုတွေကိုပါ
လက်ရှိဘဝမှာ ခံရနိုင်သလို ထိုသူအတွက် လည်းတမလွန်ဘဝမှာ အပါယ်လေးပါးကျရောက်နိုင်ပါတယ်။
မွေးလာကတည်းက မျက်လုံးကန်းသူ၊ ခြေပြတ်၊ လက်ပြတ်၊ ဆွံ့အ နားမကြားသူများကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်မိရင်လည်း ရေရှည် မှာ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ တချို့ ဇနီးမောင်နှံတွေ ဖူးစာလို့ပြောရမလား၊ သနားတယ်လို့ ပြောရမလား၊ အိမ်ထောင် ဖက်ရွေးချယ်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း နေနှင့်လ ရွှေနှင့်မြဆိုတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ရှေးပညာရှိများက အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ကြတဲ့ အခါထို”ချာသုံးချာ”ကို ရှောင်ကြပါလို့ ဆုံးမခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ အနာရောဂါ ပါလာသူ။
၃။ အပိုစားမည့်သူ(လူပိုတွေ) ပါလာသူ။
၁။ အနာရောဂါ ပါလာသူ ဆိုတာ-
နာတာရှည် အနာရောဂါပါ လာသူကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ရင်လည်းသူ့ကို ဆေးကုပေးရမယ်၊ ဓာတ်စာ ကောင်းကောင်း ဝယ်ကျွေးရမယ်၊ တိုင်းရင်းဆေး၊နိုင်ငံခြားဆေး မျိုးစုံနဲ့ဆေးကုပေးရမယ်၊ဆေးရုံ ဆေးခန်းကောင်းကောင်းတတ်ပြီးဆေးကုပေးရမယ်၊
ကိုယ်အိမ်ထောင်ဖက်ကို ဆေးကုပေးနေရတာနဲ့တင် စီးပွားရေး ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘဲ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အနုတ်လက္ခဏာ တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
အကြွေးပါလာသူကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်မိရင် သူ့မှာတင်နေတဲ့ အကြွေးကိုကိုယ်က လိုက်ဆပ်ပေးရပါတော့မယ်။ အိမ်ထောင် ပြုခါစ ထိုထိုအိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ အကြွေးများ ကို လိုက်ဆပ်နေ ရမည်ဆိုလျှင် စီးပွားရေးနလံထူဖို့ရာ အတော်ခက်ခဲ့သွားပါလိမ့်မယ်။
ထိုသူမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်ရင်လည်း ရေရှည်မှာ အဆင်မပြေ နိုင်ပါဘူး။
စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ ကုန်ဈေးနှုံတွေက အရမ်းကြီးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ အဆင်မပြေပြန်ရင်လည်း လူမှုရေး အခြေအနေ မကောင်းနိုင်ပါဘူး၊ လူမှုရေးအခြေအနေ မကောင်းရင် တော့ ထိုဒဏ်ကို သည်းမခံနိုင်ကြတော့သည့်အဆုံး လင်မယားခန်း ပြတ်စဲတာတွေပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါမို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုမည်ဆိုလျှင် မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် မှာ “ကွာသုံးကွာ၊ချာသုံးချာ၊ပါသုံးပါ” ထဲတွင် ပါမပါ သုံးသပ်ပြီးတော့မှ ထို” ကွာ၊ချာ၊ပါ”သုံးမျိုးကို ရှောင်ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်ကြဖို့ ရှေးပညာ ရှိများက အလေးအနက် ညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။
REF: ဒါပေသိ ရှေးပညာရှိများ
ကှာ သုံး ကှာ၊ ခြာ သုံး ခြာ၊ ပါ သုံး ပါ ဆို တဲ့ ဗဟု သုတ ရစရာ အကွောငျး လေးပါ….
အောကျပါ အကွောငျးအရာ စာစုသညျ ဘုရားဟောဒသေနာ မဟုတျသညျ့အတှကျ အခြို့သူတှအေတှကျ မှနျခငျြမှနျမယျ၊ အခြို့သူတှအေ တှကျ မှားကောငျးမှားနိုငျပါတယျ။ အိမျထောငျပွု၊ ဘုရားတညျ၊ဆေးမှငျရညျ စုပျထိုး၊ ကြောငျးထိုငျပငျ့ ၊မွတျသံဃာ၊ စာခြုပျရနျ ခကျသညျ့ အမြိုး။” ဆိုတဲ့ ရှေးပညာရှိမြားဆိုမိနျ့စကားရှိပါတယျ။အရှယျရောကျ လာကွသူ အမြိုးသား အမြိုးသမီးတိုငျး (အပြိုကွီး၊ လူပြိုကွီးကလှဲ ရငျ)အိမျထောငျပွုကွ မှာဖွဈပါတယျ။
အိမျထောငျပွုကွတဲ့ အခါမှာ လညျး မိဘပေးစားလို့ အိမျထောငျပွုခွငျး၊ ကိုယျအခငျြးခငျြး မတ်ေတာမြှကွလို့ အိမျထောငျပွုခွငျးဆိုပွီး နှဈမြိုးရှိ ပါတယျ။ဘယျလိုပုံစံ မြိုးဖွငျ့ အိမျထောငျပွုပွု အထူးဆငျခွငျသငျ့၊ ရှောငျရှားသငျ့သညျ့ “ကှာသုံးကှာ၊ ခြာသုံးခြာ၊ ပါသုံးပါ” ကိုတော့ အထူးရှောငျရှားကွပါလို့ ရှေးပညာရှိမြားက သတိပေးပွောဆိုဆုံးမခဲ့ကွပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုရငျ အိမျထောငျရေး အဆငျမပွမှေု တှဖွေဈမှာ ဆိုးသညျ့အတှကျကွောငျ့ပါ။
ဒါကွောငျ့ အိမျထောငျပွုတဲ့အခါမှာ “ကှာသုံးကှာ၊ ခြာသုံးခြာ၊ ပါသုံးပါ”ကို သတိထားလိုကျနာကွဖို့လိုပါတယျ။
၃။ စိတျနသေဘောထားတို့ ကှာခွားခွငျး တို့ ဖွဈပါတယျ။
၁။ လူမြိုးကှာခွားခွငျး ဆိုတာ လူမြိုးခွား ကို အိမျထောငျဖကျအဖွဈ ရှေးခယျြမိတဲ့ မိနျးကလေး၊ယောကျြားလေးတှဟော ကိုယျ့မှေးဖှား လာ မယျ့ရငျသှေးငယျလေးတှကေ လူမြိုးခွား စိတျပေါကျသှားရငျ ကိုယျ့လူမြိုးတဖွေးဖွေးတုံးပွီး ပြောကျကှယျသှားနိုငျလို့ပါ။
၂။ အယူ ဘာသာကှာခွားသူကို အိမျထောငျ
ဖကျအဖွဈ ရှေးခယျြမိတဲ့ သူမြားဟာ ကိုယျကဗုဒ်ဓဘာသာ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျ က အခွားဘာသာ ဖွဈနရေငျ အိမျထောငျရေး အဆငျမပွေ မှုတှေ အနညျးနဲ့အမြားဖွဈတတျပါတယျ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ ကိုယျက ဗုဒ်ဓဘာသာဖွဈသညျ့ အားလြျောစှာ ဒါန သီလ ဘာဝနာတရားမြားကို ကငျြ့ကွံနတေဲ့ သမ်မာဒဋ်ဌိ အယူမှနျနသေူ ဖွဈလငျ့ကစား ထိုကောငျးမှုမြားကိုပွုလုပျခွငျးရှငျပွု ရဟနျခံခွငျးစတဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာနှငျ့ဆိုငျတဲ့ကုသိုလျ အလုပျတို့ကိုလုပျပမေယျ့ လို့ ကိုယျ့ အိမျထောငျဖကျက အယူဘာသာမတူညီသောကွောငျ့ ဝိုငျးဝနျးဆောငျရှကျပေးခွငျး မရှိနိုငျပါဘူး။
ကိုယျက နထေူ့းနမွေ့တျ၊ကိုယျ့ရဲ့မှေးနတေို့မှာ ဘုရားသှားကြောငျးတတျ ကုသိုလျရစေကျတှေ လုပျခွငျတယျ။ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျက ဘာသာခွားဖွဈနသေညျ့အတှကျ လိုလားနှဈသကျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရငျရရှေညျမှာ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျနဲ့ ကိုယျဟာဘာသာရေး နဲ့ပတျသကျလို့ အဆငျမပွမှေုတှဖွေဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
၃။ စိတျသဘောထား ကှာခွားသူဆိုတာ –
ကိုယျက လှူခငျြ တနျးခငျြ၊ သီလစောငျ့ခငျြ၊ဘာဝနာ တရားပှားမြားအားထုတျခငျြသျောလညျး ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျက ကိုယျ့လိုစိတျထား မြိုးမရှိဘူးဆိုရငျ ထိုကုသိုလျအလုပျမြားကို ကိုယျ့အနနေဲ့ ပွုလုပျဖို့ မလှယျကူနိုငျတော့ပါဘူး။ ထိုကုသိုလျကောငျးမှုမြား ပွုလုပျခှငျ့မရလြှငျ ကိုယျရဲ့ဘဝသံသရာအတှကျဘာမှ အားကိုးစရာရှိတော့မှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။
လကျရှိဘဝ မှာလညျး စိတျခမျြးသာမှုတှေ ပြောကျဆုံးသှား နိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ဖျောပွပါ “ကှာသုံးကှာ”ကို အိမျထောငျဖကျအဖွဈ အရှေး ခယျြကွဖို့ ရှေးပညာရှိမြားဆုံးမထားခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
အသိဉာဏျ ဗဟုသုတ အတှေးအချေါ နုံခြာနသေူကို အိမျထောငျဖကျ အဖွဈရှေးခယျြမိပွီဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့အိမျထောငျဖကျဟာ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး၊ကနျြးမာရေး၊ဘာသာရေး၊မိသားစုအရေး စတဲ့အရေးတှမှော အဆငျပွခြေောမှအေ့ောငျ တိုးတတျ ကွီးပှားအောငျ မကွံစညျနိုငျ၊ မဆောငျရှကျနိုငျတော့ပါဘူး၊အကောငျးအဆိုး အကွောငျးအကြိုးတှကေို ကိုယျတိုငျးစဉျစားဆုံးဖွတျနိုငျစှမျးမရှိတော့ဘဲ။
သူမြားပွောတာအဟုတျထငျပွီး လုပျမိ လုပျရာ အကြိုးမဲ့စမေယျ့ အလုပျတှကေိုသာ လုပျကိုငျဆောငျရှတျတတျပွီးကိုယျ့ရဲ့မိသားစုအရေး မိသားစုအရေး စတာတှကေို နိမျ့ကသြထကျ နိမျ့ကအြောငျ လုပျနတေတျပါတယျ။
၂။ စာရိတ်တနုံခြာသူ ဆိုတာ-
အကငျြ့စာရိတ်တမရှိတဲ့ သူမြိုးကို အိမျထောငျဖကျ အဖွဈရှေးခယျြမိရငျလညျး အိမျထောငျရေးအဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။ ဆငျးရဲဒုက်ခမြိုးစုံတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ။ အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျမှုတှေ၊ မိသားစု အရှကျတကှဲ အကြိုးနညျးမှုတှဖွေဈစပေါတယျ၊ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ အထငျ မွငျသေးမှု၊ သံသယမကျြလုံးတှနေဲ့ကွညျ့ခံရမှု၊ ရှံရှာမုနျးတီးမှုတှကေိုပါ
လကျရှိဘဝမှာ ခံရနိုငျသလို ထိုသူအတှကျ လညျးတမလှနျဘဝမှာ အပါယျလေးပါးကရြောကျနိုငျပါတယျ။
မှေးလာကတညျးက မကျြလုံးကနျးသူ၊ ခွပွေတျ၊ လကျပွတျ၊ ဆှံ့အ နားမကွားသူမြားကို အိမျထောငျဖကျအဖွဈရှေးခယျြမိရငျလညျး ရရှေညျ မှာ အိမျထောငျရေးအဆငျပွနေိုငျဖို့ မလှယျပါဘူး။ တခြို့ ဇနီးမောငျနှံတှေ ဖူးစာလို့ပွောရမလား၊ သနားတယျလို့ ပွောရမလား၊ အိမျထောငျ ဖကျရှေးခယျြတာမြိုးလညျး ရှိတတျကွပါတယျဒါမြိုးဆိုရငျလညျး နနှေငျ့လ ရှနှေငျ့မွဆိုတာမြိုးမဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ ရှေးပညာရှိမြားက အိမျထောငျဖကျရှေးခယျြကွတဲ့ အခါထို”ခြာသုံးခြာ”ကို ရှောငျကွပါလို့ ဆုံးမခဲ့တာဖွဈနိုငျပါတယျ။
၁။ အနာရောဂါ ပါလာသူ။
၃။ အပိုစားမညျ့သူ(လူပိုတှေ) ပါလာသူ။
၁။ အနာရောဂါ ပါလာသူ ဆိုတာ-
နာတာရှညျ အနာရောဂါပါ လာသူကို အိမျထောငျဖကျအဖွဈ ရှေးခယျြလိုကျရငျလညျးသူ့ကို ဆေးကုပေးရမယျ၊ ဓာတျစာ ကောငျးကောငျး ဝယျကြှေးရမယျ၊ တိုငျးရငျးဆေး၊နိုငျငံခွားဆေး မြိုးစုံနဲ့ဆေးကုပေးရမယျ၊ဆေးရုံ ဆေးခနျးကောငျးကောငျးတတျပွီးဆေးကုပေးရမယျ၊
ကိုယျအိမျထောငျဖကျကို ဆေးကုပေးနရေတာနဲ့တငျ စီးပှားရေး ကောငျးကောငျးမလုပျနိုငျတော့ဘဲ စီးပှားရေးနယျပယျမှာ အနုတျလက်ခဏာ တှနေဲ့ ကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ။
အကွှေးပါလာသူကို အိမျထောငျဖကျ အဖွဈရှေးခယျြမိရငျ သူ့မှာတငျနတေဲ့ အကွှေးကိုကိုယျက လိုကျဆပျပေးရပါတော့မယျ။ အိမျထောငျ ပွုခါစ ထိုထိုအိမျထောငျဖကျရဲ့ အကွှေးမြား ကို လိုကျဆပျနေ ရမညျဆိုလြှငျ စီးပှားရေးနလံထူဖို့ရာ အတျောခကျခဲ့သှားပါလိမျ့မယျ။
ထိုသူမြိုးကို အိမျထောငျဖကျ အဖွဈရှေးခယျြရငျလညျး ရရှေညျမှာ အဆငျမပွေ နိုငျပါဘူး။
စီးပှားရေးနယျပယျမှာ ကုနျစြေးနှုံတှကေ အရမျးကွီးပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကိုယျ့အိမျထောငျဘကျနဲ့ အဆငျမပွပွေနျရငျလညျး လူမှုရေး အခွအေနေ မကောငျးနိုငျပါဘူး၊ လူမှုရေးအခွအေနေ မကောငျးရငျ တော့ ထိုဒဏျကို သညျးမခံနိုငျကွတော့သညျ့အဆုံး လငျမယားခနျး ပွတျစဲတာတှပေါ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒါမို့ကွောငျ့ အိမျထောငျပွုမညျဆိုလြှငျ မိမိရဲ့ အိမျထောငျဖကျ မှာ “ကှာသုံးကှာ၊ခြာသုံးခြာ၊ပါသုံးပါ” ထဲတှငျ ပါမပါ သုံးသပျပွီးတော့မှ ထို” ကှာ၊ခြာ၊ပါ”သုံးမြိုးကို ရှောငျပွီးတော့ အိမျထောငျဖကျအဖွဈရှေးခယျြကွဖို့ ရှေးပညာ ရှိမြားက အလေးအနကျ ညှနျကွားဆုံးမခဲ့တာ ဖွဈပါ တယျ။
REF: ဒါပသေိ ရှေးပညာရှိမြား